Outlook Kugadzirisa Turu. Outlook Kudzoreredza Software. PST Kugadzirisa Turu.
DataNumen Outlook Repair ndiro yakanakisisa Maonero ekugadzirisa uye kudzoreredza pasi. Iyo inogona kugadzirisa yakashata Outlook PST mafaera uye kudzoreredza ese maemail, vanobata, makarenda, kugadzwa, mabasa, manotsi, majenali, posts, nezvimwewo mavari sezvinobvira, nokudaro vachideredza kurasikirwa muhuori hwefaira.
DataNumen Outlook Repair inonzi kare Advanced Outlook Repair.
For OST faira kupora uye OST kuPST faira rekushandurwa, ndapota shandisa DataNumen Exchange Recovery.
Sei DataNumen Outlook Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweiyo Outlook yekugadzirisa chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Outlook Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi, kusanganisira Inbox Kugadzirisa chishandiso (scanpst) uye zvimwe zvishandiso zvePST zvekugadzirisa, mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Outlook Repair inoputa kukwikwidza
Outlook yakasvibiswa, pakarepo mushure meWindows kugadzirisa purogiramu yangu yeEndaneti Outlook yakamira kushanda. Ini ndaishandisa datanumen chigadzirwa kugadzirisa email
Outlook yakasvibiswa, pakarepo mushure meWindows kugadzirisa purogiramu yangu yeEndaneti Outlook yakamira kushanda. Ini ndaishandisa datanumen product yekugadzirisa zvakare mafaera emaimeri zvakanaka uye zvakashanda. Zvese zvandaifanira kuita kumhanyisa chirongwa kugadzirisa iyo data, kushandura iyo data faira zita uye kumhanya Outlook. Presto yakashanda. Kutenda kuzhinji
Ndiri kufadzwa nekureruka kwekushandisa uye nekukurumidza kupora kwefaira. Kunyangwe zvese, ini handichazvida zvakare, saka ndakazvisunungura mushure mefaira mbiri
Ndiri kufadzwa nekureruka kwekushandisa uye nekukurumidza kupora kwefaira. Kunyangwe zvese, ini handichazvida zvakare, saka ndakazvisunungura mushure mekudzoserwa kwemafaira maviri.
Ndatenda nechigadzirwa chevanhu vadiki vane hombe dambudziko.
Ini ndashandisa yako Outlook kugadzirisa.
Dai chete vamwe vanhu vaigona izvi zvinobudirira.
Ini ndaifanira kutumira meseji yekutenda kambani yako nekuda kweichi chikuru Datanumen Outlook repair chigadzirwa!
Ini ndanga ndichishandisa imwe chirongwa kuyananisa maonero angu
Ini ndanga ndichishandisa imwe chirongwa kuyananisa maonerwo angu (Companion Link) uye foni yangu uye chirongwa chakatadza kushanda uye ndikapukuta data rangu nyowani pakombuta yangu nedata rekare kubva kufoni yangu. Ini ndanga ndisina backup yeiyo yekuona faira uye ini ndainetseka zvakanyanya kurasikirwa nezvakakosha kwazvo zvinyorwa kumanotsi. Ini ndakapedza zvakaringana kwemazuva mashoma ndichifunga nekutsvaga nzira yekugadzirisa izvi kuburikidza neese nzira inogoneka (shanduro dzekare, imwe software yekudzosa, mamwe matipi epamhepo) uye zvaiita kunge zvisingaite, asi nerombo rakanaka ndakawana Datanumen chigadzirwa uye ndakakwanisa kugadzirisa / kudzoreredza iyo lost zvinyorwa! Nekuve bhizinesi diki uye kuburikidza nedzimwe nguva dzakaoma dzehupenyu ndaive ndakanyanyisa pasi, ndakasuruvara, ndakashatirwa pandakafunga kuti data rangu rekutarisa rakanyorwa pamusoro nekanganiso iyoyo uye ndakagumburwa ndisina nzira yekuidzosa uye ndakafara kwazvo kuwana izvi Datanumen chirongwa uye chiite kuti chishande kudzoreredza dhata yangu, zvinoshamisa uye software yacho yaive intuitive uye nyore kushandisa. Iyi ikambani yakadai uye yaingoda kuzivisa munhu wese kuti vanoita mutsauko muhupenyu hwevanhu kuti ive nani !!!
Ndatenda zvikuru zvakare.
Yakagadzirisa rimwe faira rangu iro Microsoft yakarongerwa se "huori". Miriyoni ndatenda.
Sheer mashiripiti - akagadzirisa faira iyo scanpst.exe yaisagona kana kuziva seAptlook Mailbox. Kutenda nekutenda kwechigadzirwa chinotyisa.
Ndinoda kupa kutenda kwangu DataNumen inc. nerubatsiro rwako uye software yako yakanyatsoita basa rayo uye ichibvumidza munhu asina ruzivo
Ndinoda kupa kutenda kwangu DataNumen inc. yerubatsiro rwako uye software yako yakanyatsoita basa rayo uye ichibvumira munhu asina ruzivo kuti awane mafaira ake eAptlook 2007 PST.
Calgary, AB, Kanadha
Dai 8th, 2020
Chishandiso chako chakabatsira mukudzorera email yese yemukadzi wangu. Ndinokutendai zvakanyanya kwamuri uye nechikwata chenyu chose nekupa ichi chinoponesa uye chiri nyore
Chishandiso chako chakabatsira mukudzoreredza email email yemukadzi wangu. Ndatenda zvikuru kunewe uye nechikwata chako chose nekupa ichi chinoponesa uye chiri nyore kushandisa chishandiso !!
Retired GE Mwenje
Ndatenda zvikuru nekuda kwerubatsiro rwenyu uye ndinotenda nemhinduro dzenyu dzinokurumidza. Ini zvirokwazvo ndinokurudzira chigadzirwa chako.
Iyi meseji inoshanda seGURU RAKUTENDA iwe kune yako yakajeka Outlook yekugadzirisa turu. Mutengi wangu anga achisangana nemagetsi akawanda
Iyi meseji inoshanda seGURU RAKUTENDA iwe kune yako yakajeka Outlook yekugadzirisa chishandiso. Mutengi wangu anga achisangana nemagetsi akawanda akonzera kuti Outlook pst iite huwori. Scanpst yakauya nekanganiso ichitaura nezvematambudziko ediski. Ndakaenda nekanganiso iyi uye nerombo rakanaka ndakagumburwa pane chako chigadzirwa. Ini ndakaisa ndikamhanya chishandiso chakatora anopfuura maawa maviri kuti chipedze. Mhedzisiro mhedzisiro yaive yakanyatsoshanda Outlook iyo yaive nekukurumidza zvakanyanya kupfuura pakutanga! Mutengi wangu ari pamusoro pemwedzi sezvo iri bhizinesi account kuvimba zvakanyanya neemail.
Ndinokutendai nechigadzirwa chikuru, ndichave ndichikurudzira kune vese vandinoshanda navo IT. Kuti uwane ruzivo, zvakatipoteredza zvinotevera:
Desktop pc (yechinyakare modhi IBM) ine mbiri-musimboti cpu, 4Gb ram, Windows 7 nyanzvi uye Outlook 2007. PST iri approx. 4.5Gb.
Ndokumbirawo muenderere mberi nebasa rakakura.
Facile uye Efficace
Kutenda kukuru kwazvo.
Kukwidziridzwa kweMS Office kwakadonhedza komputa yangu uye ini ndaifanira kudzima uye kuisazve. Mukuita uku Outlook haina kugamuchira yekare.ost
Kukwidziridzwa kweMS Office kwakadonhedza komputa yangu uye ini ndaifanira kudzima uye kuisazve. Mukuita uku Outlook haina kugamuchira yekare.ost faira uye ini lost maemail angu ese akachengetwa muma-sub-folders (yemuno makomputa chete). Uku kukundikana pachinzvimbo cheOptlook, kwete kugadzirisazve ma-sub-maforodha pane server. Mushure memaawa matanhatu ekutya, ini ndawana saiti yako ndikabuditsa software, isingasvike maminitsi makumi matatu gare gare zvese zvaive zvakanaka zvakare. Maemail ese akachengeteka uye anowanikwa.
Ini ndaodhaunirodha yako yekuona yekugadzirisa software nekuda kwekugara uchikanganisa mameseji nezve yangu outlook.pst faira isina kuvharwa mushe
Ini ndaodhaunirodha yako yekuona yekugadzirisa software nekuda kwekugara uchikanganisa mameseji nezve yangu outlook.pst faira isina kuvharwa mushe pane yekupedzisira kushandiswa. Iwe software yakashanda zvakakwana. Yangu pst faira yakakura kubva 1.9gb kusvika 2.45gm ine 'lost data 'iyo yakanga yawanikwazve uye yakaiswa zvine hungwaru mumafaira maviri' akadzorerwa '(kwete kungokandwa mubhokisi) kuti ini nditarise. Zvakatora isingasviki maminetsi gumi kuti uwanezve zvakakwana uye kuongorora zvinhu zvakatumirwa tsamba.
Zvakare ndinoti maita basa nekupa software yakanaka kudaro inoita zvarinotaura zvinoita pasina zviyero zvekushandisa zvakavanzika. Ini ndinokurudzira zvikuru chishandiso ichi kune vese vashandisi vemakomputa yekushandisa bhokisi.
Mushandisi wemakomputa epamba
Chidimbu chakanakisa che software icho chakanyanya kukwana uye uye inotsvaga yakadzika kuti uwane yakadzimwa uye lost maemail. Ini ndakakwanisa kudzoreredza chakakwirira huwandu
Chidimbu chakanakisa che software icho chakanyanya kukwana uye uye inotsvaga yakadzika kuti uwane yakadzimwa uye lost maemail. Ini ndakakwanisa kudzoreredza huwandu hweruzivo izvo zvisina imwe software yandaishandisa yaigona. Ini chaizvo ndakakoshesa kuve nekukwanisa kushandisa iyi application pachivande pasina cost.
Iyi software yakanaka kwazvo. Ndiri kukutendai chaizvo nekupa chakakosha chishandiso (DataNumen Outlook Repair v 1.2 yakazara vhezheni) ye
Iyi software yakanaka kwazvo. Ndiri kukutendai chaizvo nekupa chakakosha chishandiso (DataNumen Outlook Repair v 1.2 yakazara vhezheni) yekushandisa yeruzhinji. Ndizivise kana iwe uchigona kupa maturusi chimwe chinhu chinopfuura ichi.
DATEL Maitiro & Software FZ LLC
Nexus IT Vanopa mazano
Park Guta, Utah, USA
Ndatenda nekuisa. Ndakafunga zvekuita panguva iyi. Yakadzorerwa almost zvese zvangu lost email. Kutenda nechigadzirwa chakanaka ...
Ndakagamuchira DVDRom ne zipped pst-faira. Ini ndakakwanisa kuiburitsa uye zvese zviri kushanda mushe zvakare.Ndinoshuvira kukutendai neiyo
Ndakagamuchira DVDRom ne zipped pst-faira. Ini ndakakwanisa kuitora uye zvese zviri kushanda mushe zvakare.Ndinoshuvira kukutendai nerudzi rutsigiro rwakanaka uye nerubatsiro rwese rwamakandipa. Dai zvaisave zvako neAOR ndingadai ndisina kuzotora data iri mufaira.
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu - ndinonyatso kuonga.
Mushandi muProcter & Gamble
Mhoroi, ndatenda nekupindura. Ini ndakakwanisa kuzvimisikidza pachangu kubva email yekutanga, ndine urombo kuti ndakunetsa. BTW, ida chigadzirwa.
Izvo zvinokwanisika kutsanangura nzvimbo uye zita refaira rega rega mune iyo Batch Kugadzirisa tebhu? Izvi zvave kutokwanisika muKugadzirisa tebhu, apo
Izvo zvinokwanisika kutsanangura nzvimbo uye zita refaira rega rega mune iyo Batch Kugadzirisa tebhu? Izvi zvave kutokwanisika muKugadzirisa tebhu, kana uchingogadziridza faira rimwe chete, asi zvaizonyanya kubatsira dai zvaibvira kugadzirisa iyo yakaburitsa faira ruzivo mukugadzirisa batch.
Chigadzirwa chikuru nenzira! AOR yawanazve most yezvinhu kubva yakakosha 6GB PST faira. Kwangu kuyedza kuyedza ne SCANPST kwaive kungodzora 500mb!
Nguva yapfuura ndinotenga Datanumen Outlook Repair uye ndinofara nazvo, ndichiishandisa fomu nguva nenguva. Iye zvino ini ndoda kudzosera maemail akadzimwa kubva muboka re NSF
Nguva yapfuura ndinotenga Datanumen Outlook Repair uye ndinofara nazvo, ndichiishandisa fomu nguva nenguva. Iye zvino ini ndoda kupora dzadzimwa maemail kubva muboka re NSF Lotus Notes faira. Ini ndaifunga kuti unogona kunge uine chigadzirwa chakanaka asi maiwe hauna kana chinhu cheLotus Notes. Zvakanaka, sezvo iwe uchiita zvinhu nemazvo, wadii a Datanumen NSF Kugadzirisa? Zvakanakisisa, Roberto
Kutenda Alan, Kugadzira kwakashanda almost kukwana ... Handina kutarisira izvozvo zvakanaka. Ndatenda zvikuru. Helmut
Helmut Demmelhuber Demmelhuber Kubvunza
Kutenda zvakanyanya iwe kutsigira --- zvakashanda nekungogadzira iyo nyowani nhoroondo.
Ini ndanga ndichida kungoti Maita henyu nesoftware.
Yangu yeAptlook data faira inoita kunge mostly yakatarwa.
Ini ndaida kuongorora uye kudzima toni yekupinda
Ini ndaida kuongorora uye kudzima toni yezvinyorwa asi, ndinofunga, ndakapora most ye data rangu.
Handife ndakaziva zvandinazvo lost zvachose!
Zvita 4, 2018
Inodhura asi yakaita zvese zvakavimbiswa kusanganisira izvo zvekubatanidza
Saka zvakadii izvo zvakakosha? Yakakurudzirwa!
Advanced Outlook Repair rakagadziriswa zvizere 19GB Outlook 2007 .pst ine akawanda maforodha kubva pamusoro pemakore gumi nemashanu. Yakave yakashatiswa mushure mekuoma
Advanced Outlook Repair rakagadziriswa zvizere 19GB Outlook 2007 .pst ine akawanda maforodha kubva pamusoro pemakore gumi nemashanu. Yakave yakashatiswa mushure mekuvharwa kwakasimba, uye yaisazovhura, kunyangwe mune yakachengeteka nzira. Ndakanzwa nezve chishandiso chako kubva ku "chcw" pa ExpertsExchange.com uye kubva kune yekugadzirisa muzana muzana tafura yekuenzanisa pakati pezvishandiso pa Datanumen.site. Ini ndanga ndagadzira kopi ye .pst, uye ndakaedza ndisina rombo rakanaka neMicrosoft scanpst.exe. 3rd bato maturusi anga abatsira makore apfuura ne Outlook Express shanduko saka ndakatarisa online. Advanced Outlook Repair ndiye chete aibvumirwa kuongororwa kwakanaka kwezviitiko zvakaoma, uye vakaratidza mienzaniso yeakadai, saka ndakawana coupon ndikatenga. Chekutanga kupasa chakati iyo yekutanga faira yakachengetwa yakavhurwa neimwe sosi (kunyangwe ichitangwazve). Ini ndakazoiyedza ndichipesana nekopi, uye mukati memaminetsi (angangoita 20%), yangu Outlook yakavhurika yakavhurika - ine yakakwana kusvika pari zvino mafolda nemaemail. Zvakandityisa nekuti ndakafunga kuti ndakabata chimwe chinhu ndikachivhara. Maminetsi mashoma gare gare, izvo
Mhinduro yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso uye Matambudziko muAptlook PST Faira
Inbox Kugadzirisa Turu Haikwanise Kudzorera Zvinhu
Inbox Kugadzirisa Chishandiso hangs
Iyo Faira Haisi Yega Mapepa Mafaira
Zvikanganiso zvakaonekwa mufaira xxxx.pst…
Kanganiso isingatarisirwi yakadzivirira kupinda kweiyi faira. Shandisa ScanDisk kutarisa diski yezvikanganiso, uyezve edza kushandisa Inbox Kugadzirisa chishandiso zvakare.
Oversized PST faira dambudziko (PST saizi faira inosvika kana kupfuura 2GB muganho).
Outlook maemail uye zvimwe zvinhu zvinodzimwa nekukanganisa.
Kanganwa kana kurasikirwa ne password yeiyo yakavharidzirwa PST faira.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Repair v8.5
Tsigira 32bit uye 64bit Outlook 97 kusvika 2019 uye Outlook yeHofisi 365.
Kutsigira kudzoreredza tsamba mameseji, maforodha, posts, makarenda, kugadzwa, zvikumbiro zvemisangano, vanofambidzana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye zvinyorwa mumafaira ePST. Zvese zvivakwa, senge chidzidzo, muviri wemeseji, kuenda, kubva, cc, bcc, zuva, nezvimwe, zvinowaniswa.
Tsigiro yekudzosera maemail mune akajeka zvinyorwa, RTF uye HTML fomati.
Tsigiro yekudzosera zvakadzamidzirwa zvinhu, senge imwe email, Excel Mashandiro, zvinyorwa zveIzwi, nezvimwe.
Kutsigira kugadzirisa most yeiyo PST mafaera ayo Inbox Kugadziridza chishandiso (Iyo inonziwo Inbox chishandiso kana scanpst.exe) inokundikana kugadzirisa uye mamwe maPST ekugadzirisa maturusi haakwanise kugadzirisa.
Tsigiro yekudzosera zvakadzimwa zvinhu zveOptlook, zvinosanganisira mameseji etsamba, maforodha, posts, karenda, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye manotsi.
Tsigiro yekudzosera yakadarikidza 2GB PST mafaera.
Tsigiro yekudzoreredza PST mafaera akakura se16777216 TB (Ie 17179869184 GB).
Tsigiro yekudzoreredza password yakachengetedzwa PST mafaera, ese ari maviri anomanikidza kunyorera uye epamusoro kunyorera (kana akanakisa kunyorera) anotsigirwa. Iyo PST mafaera anogona kudzoreredzwa kunyangwe iwe usina password.
Tsigiro yekushandura PST faira kubva kuAptlook 97-2002 fomati kuita Outlook 2003-2019 / Outlook yeHofisi 365 fomati, uye neimwe nzira.
Tsigiro yekugadzira yakamisikidzwa PST faira mune Outlook 97-2002 fomati uye Outlook 2003-2019 / Outlook yeHofisi 365 fomati.
Tsigiro yekudzosera iyo data mune yakashata kana yakakuvadzwa mafaera ePST ayo scanpst uye imwe PST yekugadzirisa turu haigone kuziva uye kupora
Tsigiro yekugadzirisa "Haikwanise kufambisa zvinhu" kukanganisa mune Outlook PST mafaera.
Tsigiro kugadzirisa dambudziko iro Outlook PST /OST faira inononoka kana kusadaira.
Nzwisisika haizoshandisi kudzora Ongororo, kupora uye goho maitiro.
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook kubva kune isina kukanganisika kana kukuvara VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaera (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (*. Vhd), Acronis True Image mafaera (*. Tib), Norton Ghost mafaera (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (*. Iso), Disk mafaera emifananidzo (*. Img), maCD / mafaera emufananidzo eDVD (*. Bin), Doro 120% Mirror Disk Faira (MDF) mafaera (*. Mdf) uye Nero mafaira emifananidzo. (* .nrg).
Tsigiro yekudzoreredza data kubva kune temporary mafaera akagadzirwa neAptlook pakaitika dambudziko redata.
Tsigiro kugadzirisa PST mafaera pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch yemafaira ePST akaora.
Tsigiro yekutsvaga nzvimbo yemafaira ePST kuti igadziriswe pakombuta yemuno, zvinoenderana nedzimwe nzira dzekutsvaga.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, saka unogona starta PST yekugadzirisa basa nemamiriro ezvinhu eWindows Explorer zviri nyore.
Tsigira kudhonza & kudonhedza mashandiro.
Tsigiro yekugadzirisa yakaora PST faira kuburikidza nemirairo yemirairo parameter.
kushandisa DataNumen Outlook Repair Kudzoreredza Yakaora Maonero PST Mafaira
Kana ako Outlook PST mafaera akaora kana kukuvara uye iwe usingakwanise kuvhura kazhinji mu Microsoft Outlook, unogona kushandisa DataNumen Outlook Repair kuti utarise mafaera ePST uye udzore data kubva kumafaira zvakanyanya sezvinobvira.
Ongorora: Usati wagadzirisa yakaora kana kukuvara faira rePST ne DataNumen Outlook Repair, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuchinja iyo PST faira.
Sarudza yakaora kana yakakuvara Outlook PST faira kuti igadziriswe:
Unogona kuisa zita refaira rePST zvakananga kana kudzvanya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo PST faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
Kana iwe uchiziva iyo vhezheni vhezheni yeiyo sosi PST faira kuti igadziriswe, ipapo unogona kuzvitsanangura mubhokisi re combo parutivi peiyo sosi faira edit bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Hofisi 365 PST faira uye Outlook 2013-2019 / Hofisi 365 OST faira. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", saka DataNumen Outlook Repair ichaongorora iyo sosi PST faira kuti uone mafomati ayo otomatiki. Nekudaro, izvi zvinotora imwe nguva.
By default, DataNumen Outlook Repair ichachengeta iyo yakadzoserwa data mufaira nyowani inonzi xxxx_fixed.pst, uko xxxx izita reiyo faira rePST faira. Semuenzaniso, kune sosi PST faira Outlook.pst, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira ichave Outlook_fixed.pst. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kusarudza fomati yeiyo yakagadziriswa PST faira mubhokisi re combo padivi peiyo yakamisikidzwa faira edit bhokisi, zvinogona mafomati ari Outlook 97-2002 uye Outlook 2003-2019 / Hofisi 365. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", ipapo DataNumen Outlook Repair ichagadzira iyo PST faira inoenderana neAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
Baya bhatani, uye DataNumen Outlook Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi PST faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iyo sosi PST faira inogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura yakatarwa PST faira neMicrosoft Outlook. Iyo folda yese hierarchy ichavakwazve mune yakasarudzika PST faira uye maemail uye zvimwe zvinhu zvinowaniswa uye kuiswa kune avo ekutanga maforodha. Kune iyo lost & zvakawanikwa zvinhu, zvinozoiswa muRecover_Groupxxx maforodha.
DataNumen Outlook Repair 7.8 inoburitswa muna Zvita 8, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.6 inoburitswa muna Gumiguru 31, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.5 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 8, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.2 inosunungurwa munaJune 19, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.1 inoburitswa muna Ndira 22, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.0 inoburitswa muna Zvita 30, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.9 inoburitswa munaGunyana 27th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.8 inosunungurwa munaJune 29, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.6 inoburitswa munaKurume 28th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.5 inoburitswa muna Zvita 28, 2018
Tsigira Outlook 2019.
DataNumen Outlook Repair 6.0 inoburitswa muna Gumiguru 12, 2018
Ipa mamwe madhiraivhu padanda rekugadzirisa.
DataNumen Outlook Repair 5.6 inoburitswa muna Chikumi 23, 2018
Tsigira Outlook yeHofisi 365.
DataNumen Outlook Repair 5.5 inoburitswa munaKurume 29th, 2018
Kutsigira kudzoreredza akadzimwa maforodha uye mameseji.
Tsigira Outlook 2016.
DataNumen Outlook Repair 5.3 inoburitswa muna Chikunguru 16th, 2015
DataNumen Outlook Repair 5.2 yakaburitswa munaGunyana 23, 2014
Deredza kushandiswa kwendangariro.
DataNumen Outlook Repair 5.1 yakaburitswa muna Chikunguru 9, 2014
DataNumen Outlook Repair 4.5 yakaburitswa muna Kubvumbi 15, 2014
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook kubva kuVMWare VMDK (Virtual Machine Disk) mafaira (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) mafaera (* .vhd), Acronis True Image mafaera (* .tib), Norton Ghost mafaera (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup mafaera (*.bkf), ISO mafaera emifananidzo (* .iso), Disk mafaera emifananidzo (* .img), maCD / mafaera emifananidzo yeDVD (* .bin), Doro 120% Mirror Disk Faira (MDF) mafaera (* .mdf) uye maNero mafaera emifananidzo. (* .nrg).
DataNumen Outlook Repair 4.1 inoburitswa muna Kukadzi 12, 2014
DataNumen Outlook Repair 4.0 inoburitswa muna Zvita 12, 2013
Tsigira Microsoft Outlook 2013.
DataNumen Outlook Repair 3.2 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 3, 2010
Tsigira Microsoft Outlook 2010.
DataNumen Outlook Repair 3.1 inoburitswa muna Chivabvu 18, 2010
DataNumen Outlook Repair 3.0 inoburitswa munaKurume 18, 2010
DataNumen Outlook Repair 2.5 inoburitswa muna Kukadzi 10, 2010
Rongedza bhagi mukuparadzanisa mafaera makuru.
DataNumen Outlook Repair 2.1 yakaburitswa muna Kubvumbi 28, 2009
DataNumen Outlook Repair 2.0 yakaburitswa muna Chikunguru 5, 2008
DataNumen Outlook Repair 1.5 inoburitswa muna Chivabvu 28, 2008
DataNumen Outlook Repair 1.4 inoburitswa muna Chivabvu 7, 2007
Tsigira Microsoft Outlook 2007.
DataNumen Outlook Repair 1.2 yakaburitswa muna Gumiguru 9, 2006
Tsigira epamberi kupora nzira.
DataNumen Outlook Repair 1.1 inoburitswa muna Zvita 31, 2005
Tsigiro yekuona iyo sosi PST faira fomati otomatiki.
Tsigiro yekuona chinobuda PST faira fomati otomatiki zvinoenderana neshanduro yeAptlook yakaiswa pakomputa yemuno.
Tsigiro yekutsvaga nekusarudza mafaera ePST kuti agadziriswe pakombuta yemuno, zvinoenderana neimwe nzira yekutsvaga.
DataNumen Outlook Repair 1.0 yakaburitswa munaNovember 19, 2005
Chishandiso chine simba kudzosera huwori Microsoft Outlook yemunhu dhairekodhi (.pst) mafaera.